Fanontaniana: Hanampy ny bisikiletako ve ny hazakazaka - BikeHike
Manimba ny fahombiazan'ny bisikileta ve ny hazakazaka?
Mila mihazakazaka ve ny mpitaingina bisikileta?
Ohatrinona ny hazakazaka tokony hataon'ny mpitaingina bisikileta?
Tokony hihazakazaka aloha na aorian'ny bisikileta ve aho?
Afaka mihazakazaka sy mitaingina bisikileta amin'ny andro iray ve aho?
Nahoana no tsy afaka mihazakazaka ny mpitaingina bisikileta?
Nahoana no sarotra be ny mihazakazaka aorian'ny bisikileta?
Ratsy ve ny mihazakazaka aorian'ny bisikileta?
Tsara kokoa ve ny mitaingina bisikileta na mihazakazaka?
Tsara ve ny mandeha bisikileta aorian'ny fanazaran-tena?
Mandra-pahoviana aho no tokony hanao fanatanjahan-tena tsara?
Tsara kokoa noho ny mpihazakazaka ve ny mpitaingina bisikileta?
Afaka manala ny tavy kibo amin'ny bisikileta ve ianao?
Mafy kokoa noho ny mitaingina bisikileta ve ny mihazakazaka?
Tsara kokoa ve ny mandeha bisikileta na mihazakazaka amin'ny VO2 max?
Tsara ve ny 5 minitra kilaometatra amin'ny bisikileta?
Mahatonga anao hihazakazaka miadana kokoa ve ny bisikileta?
Mitovy ve ny hozatry ny hazakazaka sy ny bisikileta?
Nahoana no mora kokoa noho ny mihazakazaka ny bisikileta?
Mampitombo ny vozonao ve ny bisikileta?
Mampitombo ny tongotrao ve ny bisikileta?
Tsara ve ny manambatra ny hazakazaka sy ny bisikileta?
Afaka manome abs anao ve ny bisikileta?
Aleo manao bisikileta sa mihazakazaka aloha?
Firy kilaometatra ny bisikileta mitovy amin'ny hazakazaka?
Ahoana no tokony hanofanako bisikileta sy hazakazaka?
Sarotra kokoa noho ny mihazakazaka ve ny bisikileta?
Nitombo ny Cardiovascular, ny tanjaky ny hozatra ary ny fandeferana amin'ny fanatanjahan-tena. Ho fanampin'ny hakitroky ny taolana lehibe kokoa, ny hazakazaka ho toy ny fanazaran-tena cross-training dia afaka manome traikefa aerobic hafa tanteraka ho an'ny mpitaingina bisikileta, izay mitarika amin'ny fitomboan'ny fahaiza-manao sy ny fiaretan'ny hozatra.
Rehefa mihazakazaka ianao, ny fahasimban'ny fibra hozatra mitranga dia lehibe kokoa noho ny fahasimbana mitranga rehefa mitaingina bisikileta ianao. Noho izany, ny fihazakazahana aerobic mandritra ny adiny roa dia ho mafy kokoa ho an'ny vatanao noho ny fiofanana aerobic mandritra ny adiny roa amin'ny bisikileta.
Aorian'ny fiatoana fohy amin'ny faran'ny vanim-potoana, dia ampidiro amin'ny fomba rehetra ny fihazakazahana amin'ny fitondran-tenanao amin'ny ririnina. Mandritra ny dingan'ny fanazaran-tena amin'ny ankapobeny dia tsy mampaninona ny fomba hijanonanao ho salama raha mbola manao izany ianao, ary amin'izany fomba izany dia mety hanampy ny bisikiletanao ny hazakazaka.
Tokony hiasa hatramin'ny fahafahana mihazakazaka 30 minitra am-pilaminana ianao, tsy mahatsapa fanaintainana lehibe ny ampitso. Ny antony sasany izay misy fiantraikany amin'ny fandeferan'ny vatana amin'ny fihazakazahana dia ahitana: Fotoana (Totalana fotoana lany amin'ny fiofanana) Fomba (karazana fiofanana ampiasaina).
Ny valiny fohy tadiavin'ny rehetra dia azo fehezina. Raha te hanorina hozatra ianao dia mihazakazaka aloha. Raha te hanatsara ny fiaretanao sy ny fahaiza-manao aerobic ianao dia mihazakazaka farany. Amin'ny ankapobeny, ny valin-tenin'ny vatanao dia lehibe kokoa amin'ny karazana fanatanjahan-tena izay vitanao ny fanazaran-tena ataonao.
Tandremo fotsiny fa ho tombony cardio lehibe kokoa noho ny hozatra izany. Ny fanaovana azy roa amin'ny andro iray ihany dia tokony ho tsara raha toa ka manome fahasitranana sahaza ny tenanao ianao.
Ny bisikileta dia manangana hozatra tsy dia ampiasaina loatra amin'ny fihazakazahana, ka misoroka ny cramps sy ny ratra, ary ny hazakazaka dia manangana hozatra tsy ampiasaina matetika amin'ny bisikileta, izany hoe ny hambo. Samy mandray anjara amin'ny cardio ianao, saingy heveriko fa ny mihazakazaka dia afaka miala amin'ny fanazaran-tena fohy kokoa (cardio-wise) noho ny azonao atao amin'ny bisikileta.
Ny teboka dia rehefa miala amin'ny bisikileta mankany amin'ny fihazakazahana ireo hozatra izay miditra amin'ny lalao ianao dia mila fotoana hifanaraka amin'ny fihetsika vaovao sy ny adin-tsaina apetraka amin'izy ireo. Izany no mahatonga anao ho marary matetika mandritra ny tapa-bolana voalohany amin'ny fihazakazahana, ary ny fihetsikao dia toa tsy mahomby.
Amin'ny fiofanana dia manana safidy ianao. Eken’ny rehetra fa mila mihazakazaka aorian’ny hazakazaka am-bisikileta ny triathletes amin’ny fiomanana hanao izany amin’ny hazakazaka, saingy misy ihany koa ny marimaritra iraisana fa tsy ilaina ny mihazakazaka isaky ny mandeha.
Ny bisikileta dia fanatanjahan-tena tsy dia misy fiantraikany izay manampy amin'ny fananganana fiaretana sy faharetana. Raha ampitahaina amin'ny hazakazaka, dia mora kokoa ny manangana sy mitazona tanjaka eo am-bisikileta satria tara ny fanaintainan'ny hozatra sy ny fahasimbana noho ny fiantraikany ambany.
Mitaingina aloha rehefa misy hazakazaka ho avy. "Rehefa laharam-pahamehanao ny fanazaran-tena amin'ny bisikileta, ny fanazaran-tenanao hafa dia mila manohana ny tombony amin'ny bisikileta," hoy i Hammond. Midika izany - noheverinao izany - tokony handeha aloha ianao raha mila manao cardio sy tanjaka amin'ny andro iray ihany.
Miomàna handeha amin'ny bisikiletanao ary mitaingina mandritra ny 30-60 minitra, 3-5 andro isan-kerinandro. Atombohy amin'ny hafanana ny fiara rehetra. Pedal amin'ny hafainganam-pandeha miadana sy mora mandritra ny 5-10 minitra. Ampitomboy avy eo ny hafainganam-pandehanao ka manomboka tsemboka ianao.
Raha nihazakazaka sy nivezivezy nandritra ny fotoana mitovy ianao, ny hazakazaka dia mety ho mpandoro kaloria lehibe kokoa. Mipetraka ianao rehefa mitaingina bisikileta. Ny mpitaingina bisikileta iray dia mandoro kalôria 3,500-4,500 eo ho eo isaky ny dingana amin'ny fitsangatsanganana (matetika eo amin'ny adiny dimy na enina eo ho eo), raha mandoro 3,000 eo ho eo amin'ny hazakazaka iray ny mpanao marathon.
Ny fihazakazahana sy ny bisikilety dia fialam-boly mahazatra sy fanazaran-tena ankafizin'ny olona manerana izao tontolo izao. Amin'ny ankapobeny, ny mihazakazaka dia mandoro kaloria bebe kokoa noho ny bisikileta. Saingy misy fiantraikany ambony kokoa sy mafy kokoa amin'ny hozatra sy ny tonon-taolana.
Rehefa mihatsara ny fahasalamanao cardiorespiratory (VO2 max), dia tsy maintsy ahena ny isan-jaton'ny enta-mavesatry ny asa ao anatiny mba hamokarana watts mitovy. Raha mpitaingina bisikileta sy mpihazakazaka mavitrika ianao, dia ho hitanao fa manana VO2 max iray ho an'ny bisikileta ianao ary sanda VO2 max mitovy nefa hafa kely amin'ny hazakazaka.
Ny salan'isa amin'ny bisikileta iray kilaometatra dia telo ka hatramin'ny efatra minitra. 17 ka hatramin'ny 18 mph no hafainganam-pandehan'ny bisikileta salan'isan'ny olona salama mitaingina bisikileta miaraka amin'ny bisikileta tsara kalitao amin'ny tany fisaka sy eny.
Tsy manampy anao hihazakazaka haingana kokoa ny mitaingina bisikileta. Mba hahatongavana ho mpihazakazaka haingana kokoa dia mila miofana amin'ny hazakazaka ianao. Ny fampidirana bisikilety amin'ny fomba fanazaran-tenanao dia tsy hanampy anao hahatratra ny fotoana hazakazaka haingana kokoa, na dia azo ampiasaina ho fitaovana fampiofanana miampita mahomby aza izany raha ampiasaina araka ny tokony ho izy.
Na ny hazakazaka sy ny bisikileta dia samy mampiasa ny quadriceps sy ny hozatra, ny hozatry ny fe ambony sy aoriana. Ny quads anao dia mampiakatra ny tongotra rehefa mihazakazaka na mihodina amin'ny pedal rehefa mitaingina bisikileta, fa ny tongotrao kosa misintona ny tongotra miverina midina. Rehefa mihazakazaka ianao, ny hozatry ny fenao no hozatra voalohany.
Amin'ny ankapobeny, na dia matanjaka kokoa noho ny tokony ho izy aza ny tongotrao rehefa mandeha na mihazakazaka, dia mbola mampiasa hozatra bebe kokoa noho ny bisikileta izy io. Ny bisikileta, mazava ho azy, dia afaka 'miodina' (izany hoe rehefa midina), izay ahafahanao mandeha haingana amin'ny hafainganam-pandeha tsy tapaka tsy mila manao ezaka ara-batana ambony.
Ny bisikileta dia tsy hanome anao vody lehibe kokoa, fa mety hanome endrika anao kokoa noho ny tombony ho an'ny cardio sy hozatra. Na izany aza, raha mitaingina tsy tapaka amin'ny hafainganam-pandeha sy fanoherana sarotra ianao, dia azo inoana fa hahita tohotra matanjaka kokoa ianao - ary ny tombontsoa ara-pahasalamana miaraka aminy, anisan'izany ny fanaintainan'ny andilana, ny lohalika ary ny kitrokely.
Fanatsarana ny fahaiza-manao Ny bisikileta dia manampy amin'ny fanatsarana ny hazakazaka amin'ny alàlan'ny fampivoarana ny vatana, ny faharetana ary ny fiaretana nefa tsy manimba ny hozatry ny tongotrao. Fanatanjahan-tena ambany fiatraikany lehibe koa izy io ary amin'ny fampidirana azy amin'ny fitondranao fiofanana isan-kerinandro dia hanampy anao hanao bebe kokoa amin'ny fihenjanana kely amin'ny vatanao.
Ny bisikileta dia tsy manangana ny abs anao mivantana, fa afaka manampy amin'ny fanehoana ny abs anao izany raha ampiarahina amin'ny sakafo mety sy fanazaran-tena fanampiny. Ny mitaingina bisikileta dia manampy amin'ny famongorana ny tavy mandrakotra ny abs.
Ny fihazakazahana dia mandoro kaloria bebe kokoa noho ny mitaingina bisikileta ary azo ianteherana ihany koa amin'ny fanamafisana ny hozatra, noho izany, raha ara-teorika dia mety hanatsara kokoa ny fahasalamanao izany. Mba hahazoana tsara indrindra amin'ireo hetsika roa ireo dia mandehana bisikileta aloha ary mihazakazaka avy eo, mametra ny tenanao ho tsy mihoatra ny 10 isan-jaton'ny kilaometatra nandehananao tamin'ny nanombohanao voalohany.
Ny fitsipika ankapobeny dia 1: 3 na 1: 2 mihazakazaka amin'ny bisikileta amin'ny kilaometatra. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny hazakazaka 1 kilaometatra amin'ny haavo antonony dia mitovy amin'ny bisikileta 2-3 kilaometatra amin'ny haavon'ny ezaka mitovy. Ny fihazakazahana dia hetsika misy fiantraikany lehibe ary mitaky ny vatana manontolo hihetsiketsika.
Ireto misy fomba telo hampifangaroana ny bisikileta sy ny fihazakazahana amin'ny drafitry ny fiofanana mandritra ny fahavaratra: Miofana mafy amin'ny fihazakazahana ary miverina amin'ny bisikileta. Raha mpihazakazaka ianao izay miofana amin'ny fanazaran-tena mafy kokoa, anisan'izany ny hazakazaka lavitra, ny hafainganam-pandeha, ny hazakazaka havoana, ary ny fanazaran-tena amin'ny havoana, dia azonao atao ny manenona amin'ny fanazaran-tena mandeha bisikileta roa isan-kerinandro.
Mafy kokoa izy io — tsy maintsy miasa mafy kokoa ny tonon-taolanao sy ny hozatrao mandritra ny hazakazaka. Amin'ny bisikileta, ny lanjan'ny vatanao dia tohanan'ny lasely ary ny bisikiletanao dia manampy anao handroso. Amiko dia toa mitovy amin'ny adiny roa farafahakeliny amin'ny bisikileta ny hazakazaka adiny iray.
Manampy amin'ny fihazakazahana ve ny bisikileta
Fanontaniana: Manampy amin'ny fianjerana ve ny bisikileta
Manampy amin'ny fiaretan'ny bisikileta ve ny hazakazaka
Valiny haingana: Manampy amin'ny fampandehanana Reddit ve ny bisikileta
Manampy anao ve ny hazakazaka bisikileta
Valiny haingana: Manampy amin'ny fiaretana mihazakazaka ve ny bisikileta
Manampy amin'ny bisikileta an-dalana ve ny mihazakazaka
Valiny haingana: Manampy amin'ny fanatanjahan-tena mihazakazaka ve ny bisikileta
Manampy amin'ny fihazakazahana ve ny bisikileta an-trano
Afaka manampy anao hihazakazaka haingana kokoa ny bisikileta
Fanontaniana: Manampy anao hihazakazaka tsara kokoa ve ny bisikileta
Valiny haingana: Manampy anao hihazakazaka haingana kokoa ve ny bisikileta